अझै बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने सोच छ, कम्पनीले अवकाश दिए पनि घर बस्दिन - Artha Path Artha Path
अझै बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने सोच छ, कम्पनीले अवकाश दिए पनि घर बस्दिन
तपाईं संगसंगै खुलेको कम्पनीहरुले धमाधम आईपीओ ल्याउन थाले, जीआईसीले कहिले ल्याउँछ ?
आईपीओमा हामीले दर्ता गरेका छौँ । हप्ता दुई हप्ताभित्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति आउँछ । स्वीकृति पाएको महिना दिनमा सर्वसाधारणले सेयर पाउँछन् । एक महिनाभित्र सेयर जारी गर्नेर्छाैँ ।
ढिलो भएको छैन् । प्रोसेस गर्दा समय लागेको मात्रै हो । अनि त्यसपछि लकडाउनले गर्दा डेढ महिना पर स¥यो ।
जान त हामी पनि एग्रेसिप्ली जाने हो । अब एग्रेसिभ्ली जाने भनेर जस्तो पायो त्यस्तो ब्यापार गर्नुभएन । बीमा गर्ने केलाई ? दावी तिर्नुपर्छ नि । रिस्क हेरेर हामी व्यापार बढाइरहेका छौं ।
जीआईसीमा अहिलेसम्म सीईओ पद खाली नै छ, सीईओ नियक्ती भएन नि ?
सीईओ त बोर्डले निवेदन नियुक्ति गर्ने हो । सञ्चालक समितिलाई आफ्नो कम्पनीमा कस्तो सीईओ चाहिन्छ भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ होला । राम्रो क्यान्डिडेट हेरेर नियुक्त गर्छन् भन्ने लाग्छ ।
म कसरी बाधक बने र ? मैले सीईओ नियुक्त गरेर हुने हो र ? मैले त बोर्डले जे ग¥यो त्यही मान्ने हो । यदि म त्यसमा बाधक भए भने त म यहि बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन । कम्पनीको रफ्तार त म भएर रोक्ने होइन नि त । बोर्डले गर्ने आफ्नो काम गरिरहेको छ ।
उहाँहरुले के गरिरहनुभएको मलाई थाहा छैन । मलाई त्यो विषयमा केहि पनि थाहा छैन । कोभिडले गर्दा डिस्टव भएको होला । सायद अबको दुई महिनाभित्र सीईओ नियुक्त हुन्छ होला ।
केही बैंकहरु प्रमोटर रहेको जनरल इन्स्योरेन्स विजनेशको हिसाबले चाहि“ त्यति सफल भएन किन ?
कोरोना बीमामा नक्कलि सटिफिर्केट बनाएर दावी लिने पनि देखिए भन्ने सुनिन्छ नि हो ?
त्यस्तो त भएको छैन अहिलेसम्म । त्यस्तो भएको भए हामी सार्वजनिक गरिहाल्थ्यौ नि । त्यो त पेमेन्ट गर्दा छानविन गर्छाैँ । हामीकहाँ कोरोना बीमाको तीनवटामात्रै दावी आएका छन ।
जीआईसीको पनि बजेट बनिसकेको छ । हामी ८० देखि ८५ करोडको विजनेश गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । देशमा कोरोनाले ईफेक्ट गरेन भने ।\_
बैंकको ब्याजदर घटेमा नाफामा पनि दुई/चार करोड घट्छ होला ।
यसले कति प्रतिशत जति घट्छ बीमा को ?
कम्पनी त बढी कसरी भन्नु र ? हामी आजभन्दा २० वर्ष अगाडि ४ वटामात्र कम्पनी थिया ै ं। त्यसपछि पाँ च–सातवटा बढे ,अनि बजार पनि बढ्यो । त्यसपछि तीन–चार कम्पनी आए यो बन्द गर्नुप¥यो फेरि बजार बढेकै छ । २५÷३० प्रतिशतले बीमा बजार ग्रोथ भएको छ । हुँदा–हुँदा अहिले पनि ग्रोथ भएको नै छ । यो लकडाउनले गर्दा मात्रै हो नत्र बजार बढेको नै छ । त्यसैले अहिलेको हिसाबले ठिकै हो । अबचाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
बजारलाई हेर्ने हो, अलि बढी नै हो । अब २२/२५ प्रतिशतले बीमा बजार बढेकै थियो नि । अब एक अर्ब पुँजी भएन भने कम्पनीको प्रोफिट हुँदैन भन्ने हो । कोरोना नआएको भए बजार बढ्थ्यो नि । २५/३० प्रतिशतको बीमा बजार रफ्तारले बढ्थ्यो ।
नविल बैंकका बुधबार यी शाखा बन्द हुने
काठमाडौं । कोरोना भाइसरको संक्रमणका कारण बैंकहरुको शाखाहरु आंसिकरुपमा खुल्ला हुँदै आएका छन । नेपाल
प्राइम कमर्सियल बैंकका बुधबार यी शाखा खुला हुने
विहानै सिन्धुपाल्चोक केन्द्र बनाएर ६ म्याग्निच्यूडको भुकम्प
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प बुधबार बिहान पाँच बजेर १९ मिनेटमा ६ म्याग्निच्यूडको भूकम्प
अशोज १ गतेबाटै खुल्ने भयो होटल, आन्तरीक हवाई र लामो दुरीका सवारी
काठमाडौं । सरकारले अशोज १ गतेबाट लामो दुरीका यातायात र आन्तरीक हवाई खोल्ने निर्णय गरेको